Sawiro:- Bandow xalay si rasmi ah uga dhaqan-galay Muqdisho – Geelle Magazine
Sawiro:- Bandow xalay si rasmi ah uga dhaqan-galay Muqdisho
caliahmed Posted On April 16, 2020
Waxaa xalay si rasmi ah Magaalada Muqdisho ka dhaqan galay Bandow ay dhawaan kusoo rogtay Dowladda Federaal ah ee Soomaaliya, kaas oo bilaawdey 8:00 Fiidnimo kuna ekaa 5:00 Subaxnimo.
inta badan waxaa la xirey goobaha ganacsiga sida hoteelada, maqaayadaha iyo goobaha kale ee ku yaalla magaalada Muqdisho.
Wadooyinka waa weyn ee Magaalada Muqdisho iyo Xaafadaha qaar ayaa waxaa lagu arkayey Ciidamo farabadan oo ka tirsan kuwa Booliska Soomaaliya, kuwaas oo kala eryayay dadka qaarkood oo wadooyinka taagnaa.
Maamulka Gobolka Banaadir iyo Taliska Ciidanka Booliska Soomaaliyeed ayaa kormeer ku sameeyay 17-ka Degmo ee Gobolka Banaadir.
kormeerkan oo ahaa mid ay ugu kuur-galayeen sida uu u hirgalay bandowga lagu soo rogay Magaalada Muqdisho.
Taliyaha Ciidanka Booliska ayaa markale ku celiyey in Bandowga uusan saameyn doonin Wariyeyaasha, Dukaamada lagu iibiyo raashinka qalalan, Isbitaalada iyo dadka xanuunsan.
waxaana uu Ciidamada farey in ay si wanaagsan ula dhaqmaan dad Shacabka ah.
Guddoomiye ku xigeenka Amniga iyo Siyaasadda Maamulka Gobolka Banaadir Mudane Maxamed Cabdullaahi (Tuulax) oo Saxaafada la hadlay ayaa ka codsaday Shacabka ku nool Magaalada Muqdisho in ay ilaaliyaan nimaadka dowladnimada, isla markaana u hoggaan-samaan Awaamiirta Ciidamada iyo talooyinka Caafimaad, si looga hortago faafitaanka Cudurka safmarka ah ee Coronavirus.
Dowladda Soomaaliya si rasmi ah uma shaacin mudada uu socon doono Bandowga xilliga habeenkii ah ee la saarey Magaalada Muqdisho, iyada oo kiisas Cusub oo Coronavirus ahna laga helay Magaalada Muqdisho.
Dadka uu ku dhacay Cudurka Coronavirus ee dalka Jabuuti oo kor u dhaaftay 400